Freddie Ljungberg Childhood Akụkọ gbakwunyere Eziokwu Akụkọ ndụ
Home Onye na-ahụ n'anya FOOTBALL Freddie Ljungberg Childhood Akụkọ Untold Biography Eziokwu
LB na-egosi Full Story of a Football Genius with the nickname "Freddie“. Anyị Freddie Ljungberg Childhood Story Plus Untold Biography Eziokwu na-ewetara gị akụkọ zuru oke nke ihe ndị ama ama site na mgbe ọ bụ nwata ruo ụbọchị.
Ee, onye ọ bụla maara na ọ bụ onye ahụ na mbụ Akụkọ ifo Arsenal na uwe ime onye n'oge edere, ebiliwo ibu onye isi otu oge na Arsenal n’eso ya Unai Emery mkpo. Agbanyeghị, ọ bụ naanị mmadụ ole na ole n'ime ndị egwuregwu bọọlụ na-atụle ụdị nke Freddie Ljungberg's Biography nke na-atọ ụtọ nke ukwuu. Ugbu a na-enweghị ọzọ ado, ka anyị malite.
Freddie Ljungberg Akụkọ gbasara nwatakịrị gbakwunyere Eziokwu Akụkọ ndụ - Nzụlite ezinụlọ na Ndụ mbu
Malite, aha ya zuru oke Karl Fredrik “Freddie” Ljungberg. Freddie Ljungberg dịka a na-akpọ ya nke ọma ka a mụrụ ya na ụbọchị 16 nke Eprel 1977 nye nne ya, Elisabeth Bodil Ljungberg na nna, Roy Alve Erling Ljungberg, na Sweden, Western Europe.
Freddie sitere na ezinụlọ ya site na obere obodo Sweden a na-akpọ Vittsjö (Ndi bi na 1,665 na 2010). Ọ nọrọ afọ 4 mbụ nke ndụ ya na ebe ọmụmụ ya mara mma nke Vittsjö n'akụkụ nne na nna ya na nwanne nwoke nke aha ya Karl Oskar Filip Ljungberg.
Freddie Ljungberg ji afọ ndụ ya na Vittsjo. Ebe E Si Nweta: QX Sveriges största Gaysajt
Vittsjö bụ ọmarịcha obodo Sweden mara na akụkọ ntolite ka ọ bụrụ saịtị agha n'etiti Denmark, Norway na Sweden onye lụrụ ọgụ maka ịnwe nwe ya. Ị maara?… Ọ bụ na mmiri nke Vittsjö kpuru eze Sweden Gustavus Adolphus ọ fọrọ nke nta ka mmiri rie ya mgbe ọ na-alaghachi Danish agha. Ugbu a, nke ahụ bụ Ezuru akụkọ ihe mere eme !!
Ezigbo Ezinụlọ: Freddie, n'adịghị Zlatan, enwere ihe ndabara itolite site na nzụlite ezinụlọ nke ụlọ elu. Ị maara?… Nna ya Roy Alve Erling bụ ezigbo injinia ama ama nke mechara mewe ụlọ na ụlọ ọrụ ndụmọdụ. Freddie Ljungberg's mum Elisabeth Bodil Ljungberg bụkwa nnukwu ogbugba na Ngalaba Ndị Ọrụ Sweden.
Mgbe ha bichara na Vittsjö 5 afọ, na 1982, nne na nna Freddie Ljungberg hapụrụ ime obodo na Halmstad, obodo bara ụba nke dị n'ọnụ mmiri Nissan, n'akụkụ mmiri ọdịda anyanwụ Sweden. Mgbalị ndị ezinụlọ mere ịhapụ ebe obibi Freddie nke Vittsjö adịghị aga nke ọma Freddie Ljungberg. Nwatakịrị ahụ dị afọ 5 siri ike hụrụ onye ọ mụrụ n'anya achọghị ka ezinụlọ ya niile pụọ n'obodo Halmstad. Ọ rụrụ ụka na nne na nna ya bara ọgaranya nke na-ahụghị ọtụtụ ihe kpatara mkpebi ya ịhapụ ịhapụ. Ha chikotara ya na Vittsjöall rue Halmstad. Ka oge na-aga na ndụ ya, Freddie ghọtara obodo ahụ Ọ bụ ebe ọdịnala ya ka tọbọrọ
Hapụ Vittsjo gaa nnukwu obodo Halmstad bụ mkpebi kacha mma nne na nna Freddie Ljungberg mere maka ya. Ebe E Si Nweta Foto: Pinterest
Freddie Ljungberg Akụkọ gbasara nwatakịrị gbakwunyere Eziokwu Akụkọ ndụ - Nkụzi na ịrụ ọrụ
Halmstad abụrụla obodo Sweden na-ahụ n'anya nke ọma maka ịgba bọl, golf, mgbatị ahụ, bọl, igwu mmiri, ịkụ tenis, hockey ice, egwuregwu na ọtụtụ egwuregwu ndị ọzọ. Mgbe ị na-agụ akwụkwọ anwata, Freddie zụlitere talent maka bọọlụ. O ruru n'otu oge mgbe ndị otu egwuregwu Sweden nke egwuregwu Sweden nabatara talent bọọlụ ya, mmepe nke mere ka akpọọ Freddie ka ọ nọchite anya obodo ya. N'ụzọ na-awụ akpata oyi, ọ jụrụ onyinye ahụ na-ekwusi ike na ọ nwere mmasị naanị na football.
Freddie enweghị ike iguzogide football n'etiti nhọrọ egwuregwu ndị ọzọ. Na nwa aka bara ụba nwere ike itule n'etiti football na inweta akara ule di elu.
Freddie Ljungberg Akụkọ gbasara nwatakịrị gbakwunyere Eziokwu Akụkọ ndụ - Ndụ Ndụ Mmalite
Freddie Ljungberg's nne na nna anaghi echegharia ma obu iji hu nwa ha ka ha mezuo nrọ ya. Ha kwadoro ya n'ọchịchọ ọ ga - enweta agụmakwụkwọ football na Halmstads BK ebe o nwere aha ọfụma ọfụma na ntinye akwụkwọ ntorobịa nke Olle Eriksson zitere.
Freddie Ljungberg Oge mbu ya na Halmstad. Ebe E Si Nweta: Arseweb
Freddie Ljungberg mere ngwa ngwa iji kọwaa klọb ahụ. Ọ masịrị onye nkuzi ntorobịa ya Eriksson onye kwuru na nwata nwoke ahụ nwere amamihe karịa maka afọ ndụ ya. Nwa amaala a mụrụ na Sweden dị mma nke na ọ ga-echebara ndị egwuregwu ndị ọzọ echiche na oge ụfọdụ, ọbụlagodi ndị na-emegide ya. Ị maara?… Ljungberg na-eto eto n’ime ya magnanimity ga - ebunye ndị enyi ya bọọlụ mgbe ụfọdụ ka ha wee nwee ohere ịme akara.
Na afọ 12 na afọ Na 1989, ọ nọworị na-ele anya ka ọdịnihu nke football Sweden. Na nkwado iji nye ọganihu Fastrack, Freddie nwara ime ka Halmstads BK kwaga ya nzọụkwụ abụọ elu ndị ntorobịa (site na p12 rue p14) nke megidere iwu klọb n'oge ahụ.
Ljungberg mgbe ya na Halmstads BK na-agba bọọlụ, nọkwa n'ọkwa ọmụmụ ya. Ọ mere nke ọma na mmụta agụmakwụkwọ, gụchaa klas 9. Ị maara?… Akwụkwọ akara ya n'ụlọ akwụkwọ akara ka a gbakụtara 4.1 ọnụ ọgụgụ 5-point.
Freddie Ljungberg Akụkọ gbasara nwatakịrị gbakwunyere Eziokwu Akụkọ ndụ - Akpanwu akwukwo akuko
Ọ pụghị ịbụ Jack nke azụmaahịa niile: Na 18, Ljungberg emechaala ụlọ akwụkwọ sekọndrị ma ọ nọ na njedebe nke njedebe nke ịgba akwụkwọ ntorobịa ya. Ọbụla na ọ bụ isi okwu na ndụ ya nke chọrọ nlebara anya maka otu ọrụ, Ljungberg siri ike chọrọ ka ọ gaa n’ihu n’agụmakwụkwọ mahadum ya na ịgba bọlbụ ochie. N'ezie, ọ banyere mahadum ebe ọ malitere ịgụ akwụkwọ teknụzụ ozi na akụnụba.
N'oge na-adịghị anya, Ljungberg malitere ịkwa ahụ. Ọ ghọtara na ọ bụghị onye karịrị mmadụ nke nwere ike ilekwasị anya na nrụgide mahadum na nnukwu egwuregwu n'otu oge. Ọ gbalịsiri ike n'ọtụtụ oge iji nweta echiche ziri ezi n'etiti usoro agụmakwụkwọ agụmakwụkwọ ya na nkwado anụ ahụ nke ịbụ ọkachamara n'ọgba egwuregwu. Mgbe ya na ndị ezinụlọ ya kparịtasịrị, onye ọrụ ahụ kpebiri ịkwụsị mahadum iji tinye uche na football.
Ljungberg mgbe ọ hapụsịrị agụmakwụkwọ mahadum ya gara n'ihu ịme nzukọ okenye ya na 23 October 1994. N’ihe dị ka otu afọ n’ime ọrụ aka ọ na-emega emeghe, onye nwere nkà Swedish malitere ịdọta ndị isi ya. Ọ gara n’ihu nyere Halmstad aka inweta Svenska Cupen na 1995 na Allsvenskan (aha ndị otu egwuregwu Sweden) na 1997.
Freddie Ljungberg nwetara obi ndị nkuzi ya mgbe ọ nọ na Halmstad. Ebe E Si Nweta Foto: Flickr
Ọrụ dị egwu Freddie iji merie otu egwuregwu ndị ọkachamara na Sweden mere ọtụtụ klọb si mba ọzọ; mmasị nke FC Barcelona, ​​Chelsea, Aston Villa, Parma na Arsenal niile na-arịọ arịrịọ maka mbinye aka ya.
Freddie Ljungberg Akụkọ gbasara nwatakịrị gbakwunyere Eziokwu Akụkọ ndụ - Na-ewu ewu Akụkọ
N'ime ndị ọzụzụ niile, ọ bụ Arsene Wenger, (prọfesọ nwere ezi uche) nke weere nzọụkwụ pụrụ iche nke inye ikike bịanyere aka n'akwụkwọ nkwado Freddie (£ 3m) ọbụlagodi na-ahụghị ka ọ na-egwu ndụ. Wenger naanị lere Ljungberg na TV mana ọ wụrụ ya akpata oyi n'ahụ nwa ntutu ntutu spiky onye dị ka Johnny Rotten isonyere ndi otu ya.
Ljungberg enweghị oge gosipụtara onwe ya na Arsenal n'enweghị nsogbu ọ bụla ozugbo ọ malitere efe efe nke nku nke Highbury ozugbo. O were oge tupu ọ buru ụzọea dike dike na klọb. Freddie nwere nnukwu mmekọrịta dị na ya Thierry Henry ya na ọtụtụ ndị nnabata ndị ọzọ dị ugbu a ozugbo ọ sonyere klọb ahụ.
Oge kachasị mma Freddie maka ndị Arsenal bịara mgbe o nyeere klọb ahụ aka inweta Premier League ha na FA Cup nke abụọ yana nke abụọ, bụrụ akụkụ nke Arsenal 2003-04 'Invincibles'Squad, Nke kachasị mkpa, nwa goolu nke Arsenal ghọrọ onye njidere nke 2001 / 2002 Premier League Player nke Oge onyinye.
N'oge ọ lara ezumike nká, akụkọ ọdịnala nke Arsenal meriri onye otu egwuregwu Sweden nke afọ 5 nke oge.2001, 2002, 2003, 2004, 2005). Ọ meriri onye ọkpụkpọ Sweden nke afọ (2002 & 2006) e debere 11th na ndị otu egwuregwu 50 nke Arsenal.com.
Mgbe ezumike nká ya gasịrị, ịhụnanya Ljungberg nwere maka agụmakwụkwọ hụrụ ya ka ọ na-enweta ọzụzụ agụmakwụkwọ ebe o mekwara nke ọma. Na 12 July 2016, o sonyeere na ulo akwukwo ulo akwukwo nke Arsenal ikuziri ndi okpu nke 15. Nzuzo Ljungberg hụrụ ya ka ọ na-aga n’ihu na ọrụ nkuzi ya na onye enyemaka VfL Wolfsburg (2017), Arsenal U23 na nke kachasị dị mma, na-aghọ onye nkuzi nwa oge Arsenal na 29th nke November 2019. Ndị ọzọ, dị ka ha na-ekwu, bụ akụkọ ihe mere eme ugbu a.
Freddie Ljungberg Akụkọ gbasara nwatakịrị gbakwunyere Eziokwu Akụkọ ndụ - Ndụ mmekọrịta
Malite na 2000 afọ, Freddie malitere inwe mmekọrịta ma zute ụmụ nwanyị. N'agbata 2000 na 2008, amaara ya na ọ nwere enyi nwanyị 8 bụ; (1) Stephanie Saunders (2000), (2) Denise Lopez (2002 - 2003), (3) Lauren Gold (2004 - 2005), (4) Madeliene Lexander (2005), (5) Louisa Lytton (2006), (6) Gia Johnson (2007), (7) Jamie Gunns (2008) na (8) Natalie Eziugbu a nwunye ya n'oge ede).
Freddie nwere mmekọrịta ma zute ụmụ nwanyị 7 tupu ya ebiri. Ebe E Si Nweta: WhoDatedWho
Freddie zutere ịhụnanya nke ndụ ya Natalie Foster (Mba: 8) na 2007, afọ ọ hapụrụ Arsenal maka Westham. Enyi nwanyị ahụ mechara bụrụ nwunye sikwa n'ụlọ ndị ọgaranya. Ị maara? Natalie bụ nwa nwanyị nke onye isi ndị ọchụnta ego ma bụrụ onye ama ama na tagzi London Daryl Foster. Dị ka Freddie, ọ bụkwa onye 'socialite'- a maara nke ọma na ọha ejiji Britain.
Mgbe ogologo oge nchere ahụ gasịrị, mgbe ha na-akpa, ụmụ nnụnụ abụọ ahụ hụrụ n'anya kpebiri ịlụ di na nwunye na 9th nke June 2014, na mmemme n'ihu ebe a na-ewu ewu akụkọ ihe mere eme Natural Natural, London.
Freddie Ljungberg foto agbamakwụkwọ na Natalie Foster. Ebe E Si Nweta: Instagram
Ma Freddie na Natalie nabatara ụmụ abụọ Aria na Billie Ljungberg mgbe ha lụsịrị.
Freddie Ljungberg Akụkọ gbasara nwatakịrị gbakwunyere Eziokwu Akụkọ ndụ - Ndụ nke Onye
Tomata Freddie Ljungberg Ndụ Ndụ nke onwe gị ga - enyere gị aka ị nweta nkọwa dị mma banyere ụdị onye ọ bụla na football. N'otu oge, Ljungberg egosipụtawo onwe ya dị ka ihe nlereanya, ọrụ ọ masịrị ya na ijikọ bọl. Laa azụ n'oge ahụ, o mere ụdị ahụ na uwe ime maka Calvin Klein.
Ị maara?… Inwe udiri ahu; jụụ chiseled abs, elu cheekbones, na ịkpa ọchị mere ọtụtụ ụmụ nwanyị iyi niile, ihe kpatara o ji nwee ọtụtụ mmekọrịta n'oge ọ nọ na Arsenal. N'ikwu banyere ahụmịhe ya na ụmụ nwanyị n'oge ụbọchị ịme ngosi ya, Freddie gwara Sweden akwụkwọ Di n'otu oge.Akuko nke Sun);
“Ọ bụ ezie na ọ na-ada ka ihe siri ike ma mụ onwe m, agaghị agha ime. Dịka ọmụmaatụ…, Ọ bụrụ na m gaa klọb n'abalị, ụmụ agbọghọ na-abịa abịa jidere m. Dị ka nke ahụ !!!. Ih! Ọ na-eme ebe niile. Mgbe ụfọdụ, ha na-esi n'azụ bịa, n'akụkụ m dọdara ma bulie m. Ihe kacha njọ bụ na enweghị m ike ịme ihe ọjọọ banyere ya. Mgbe m were iwe wepụrụ aka ha, ndị mmadụ chịrị ọchị. ”
Ka a sịkwa ihe mere Freddie ji mara onye England se * iest onye na-agba bọọlụ n'ihi ọrụ aka ọrụ amara ya ama ama.
Freddie Ljungberg Akụkọ gbasara nwatakịrị gbakwunyere Eziokwu Akụkọ ndụ - si ebi ndụ
Tomata ụdị ndụ Freddie Ljungberg ga-enyere gị aka inweta nkọwa zuru oke banyere ụkpụrụ ibi ndụ ya. N’enweghị obi abụọ ọ bụla, Ljungberg bụ nwoke bara ọgaranya - nke nwere atụmatụ siri ike na ọ ga-eru £ 8m. Na Nwoke mara mma a maara nke ọma na North London maka ụdị ndụ o biri, otu ụgbọ ala ndị nwere flashy na-ahụ ngwa ngwa.
A hụla akụkọ Arsenal ọtụtụ ugboro, na-agbafe na North London na Sprari 360 Spider, nke na-eburu ọnụ ahịa ọnụahịa dịka £ 85,000- £ 90,000. Ahụpụtakwala ya (n'afọ 2013) ka ọ nọdụrụ ala akpụkpọ ụkwụ nke Range Rover ya mgbe ọ na-eri nri nri n'akụkụ nkịta ya, Amadeus.
Ndị egwuregwu bọọlụ, dị ka ụfọdụ n'ime anyị, hụrụ anụ ụlọ anyị n'anya na Freddie abụghị ihe dị iche. Ọbụlagodi na enwere okwu na enweghị ntụkwasị obi fọdụrụ na egwuregwu nke ugbu a, n'ezie ọ baghị n'uche mmekọrịta dị n'etiti Freddie na nkịta ya, Amadeus. Foto dị n'okpuru chịkọtara ndụ Freddie nke obi umeala. Ọ dapụrụ ụra nwaa mgbe emechara otu ụbọchị ọmụmụ ya gara aga.
Freddie Ljungberg na-ehi ụra n'ubi ya mara mma n'akụkụ ezigbo enyi ya - Amadeus.
Freddie Ljungberg Akụkọ gbasara nwatakịrị gbakwunyere Eziokwu Akụkọ ndụ - Eziokwu efu
Freddie Ljungberg Tattoos: Ị maara?… Freddie bụ otu ọgbọ nke ndị egwuregwu bọọlụ bidoro ịmara nka anụ ahụ na ngwụsị 90 na mmalite 2000. Laa azụ n'oge ahụ, ndị Sweden hụrụ n'anya na-eme ka egbugbu okike ojii ya n'úkwù ya nọ na-eyi ogologo ọkpa ya. A kọrọ na igbu egbugbu a na Los Angelos were awa asatọ ka ọ gụchaa. Dịka a hụrụ n’okpuru, o nwekwara egbugbere ọzọ nke LA mepụtara nke na-egosipụta okpukpe ya (Christianity) na ogwe aka ya.
N'otu oge, ọ chere na ya nwere HIV-AIDS: N'ihe gbasara 2005, Freddie malitere na-efu egwuregwu dị mkpa na-efu n'ihi mmerụ ahụ hip na-adịgide. Mgbe o chere na ọ ga-ebuterịrị ọrịa, ọ gara n'ihu wee nwee ọtụtụ usoro nyocha (gụnyere ihe enyemaka na kansa) iji chọpụta ihe kpatara nsogbu ya. N’agbawara egwu, a chọpụtara na o nwetụrụ mmeghachi omume egbugbu nke ya otu ụdị egbugbu ya. Freddie mere ịwa ahụ hip iji wepu ọnya na-egbu ahụ. N’okwu ya dịka thesun;
Ijọ jidere m. A nwalere m ọtụtụ ugboro, mana ọ dịghị onye, ​​m onwe m yiri ka ọ maara ihe na-eme m.
Enwere m nchegbu. Ahụ erughị m ala ma ọ bụ daa ọrịa, mana n'ezie, amaara m na m merụrụ ahụ n'ime. N’ikpeazụ, ndị dọkịta chọpụtara na o nwere ihe dị na egbugbu m. Ahụ́ ruru m ala na ha doziri nsogbu… adị m mma ugbu a. ”
Aha Nickdie Ljungberg: Ị maara?… Tupu ịkwaga ịga n'ihu na football ya na England, a maara ya dị ka “Karl Fredrik Ljungan ” na Ọ B “GH ““Freddie Ljungberg“. Agbanyeghị, mgbe ọ na-egwuri egwu Arsenal, ọ nọ na-enye utu aha ya “Freddie“, Aha a na-adịghị ahụkebe n'obodo ya.
Otu ihe egwu XBox: Freddie bụ onye ị na-amabeghị bụ onye na-egwu egwu. Apụghị na bọlbụ, ọ hụrụ n'anya ka ya na ezigbo enyi ya nọrọ Ruud Gullit (onye bụbu onye egwuregwu bọọlụ Dutch na onye egwuregwu bọọlụ). Ndị enyi abụọ ahụ enweghị ihe ha hụrụ karịa karịa ịnwe FIFA elekere ole na ole na egwuregwu Xbox mgbe ha na-anọrọ n'ụlọ mmanya.
Ndekọ Mba: Ị maara?… Ljungberg bụ onye ọkpụkpọ mbụ zitara ihe mgbaru ọsọ na Final FA Cup na mpụga England. Ọ ghọrọ onye ọkpụkpọ mbụ na afọ 40 iji gosipụta asọmpi iko FA nke abụọ. Na mkpokọta, o jidere klọb 9 na 16 mmadu na-akwanyere aha ya ugwu. Lelee nsọpụrụ ọrụ ya n'okpuru.
Freddie Ljungberg Club na Ndi Isi Nkwanye ugwu. Ebe E Si Nweta: Wikipedia na ArsenalNews
Freddie Ljungberg Akụkọ gbasara nwatakịrị gbakwunyere Eziokwu Akụkọ ndụ - Ndụ Ezinụlọ
Freddie anaghị ekwukarị banyere ma ọ bụ gosi ndị mụrụ ya ma ọ bụ ndị ezinụlọ ya na mgbasa ozi. N'ihi ya, a na-eche na papa ya na mama ya bi ugbu a n'ógbè Halmstad bara ọgaranya nke Sweden ebe ọ malitere ịgba bọl. Site n'ihe dịka o siri pụta, ọ na-egosi na ndị ezin’ụlọ niile gụnyere nwanne ya nwoke Karl Oskar Filip Ljungberg họọrọ nke ọma ịghara ịchọ ihu ọha.
Oge ikpehe mgbasa ozi jidere ezinụlọ ya ihe karịrị afọ iri gara aga, oge nna ya batara na nsogbu. Kpompi na 19 nke July, 2008, Freddie Ljungberg nna nna boro ebubo r * pe na se * ual iyi egwu. Nke a bụ akụkọ ọjọọ mere ihe wutere Arsenal akụkọ ifo (Akuko TheMirror 2008). E jidere Roy n'ụlọ ezinụlọ dị na Sweden ma nọrọ abalị atọ n'ụlọ mkpọrọ ndị uwe ojii Halmstad tupu a tọhapụ ya.
Nyochaa: Daalụ maka ịgụ Freddie Ljungberg Childhood Story Plus Untold Biography Eziokwu. Na LifeBogger, anyị na-agba mbọ maka izi ezi na izi ezi. Ọ bụrụ n’ịchọta ihe adịghị mma, biko kesaa ya nye anyị site na ịza ajụjụ n’okpuru. Anyị ga-eji echiche gị niile kwanyere ma kwanyere ùgwù ùgwù.